मेरो बैसाखमा बिहे फिक्स भएको थियो अर्को केटा कोठामा आएर….. – Sandesh Press
October 25, 2021 197
बाँकेकी संगीता सुनारको घटना निकै अनौठो छ । उनका श्रीमान सम्पर्कमा छैनन् । श्रीमानको नाम सुनिलकुमार सुनार हो । उनको विवाह भएको ६ वर्ष पुगीसकेको छ । तर उनको विवाह अनौठो तरिकाले भएको हो । संगीताको विवाह वैशाखमा अर्कै केटासंग हुने फिक्स भइसकेको थियो । सुनिलकुमार संगीताको घरमा आइरहन्थे । संगीताले सुनिललाई पुसाईँ भन्थिन्, ।
अब मेरो अर्कैसंग विवाह हुन लागेको छ मेरो पछि नलाग भनेर उनले सुनिललाई सम्झाइन् । मलाई मेरो जिवन खुसीसाथ विताउन दे भनेर भनेर मैले बारम्बार आग्रह गर्थेँ, संगीताले त्यो दिनको घटना सुनाउँदै भनिन्, त्यो दिन सुनिल मेरो कोठामा आयो । सुरुमै मेरो भिडियो खिच्यो । अनि मेरो सिउँदोमा सिन्दुर हालिदियो । मैले त्यती बेला पुसाई तपाईले किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ ? भनेर सोधें ।
मेरो प्रेमीले देख्यो भने मेरो जिवन वर्वाद हुन्छ भनेर कराएँ । उसले मलाई कर णी गर्न खोज्यो मैले कराएर सबैलाई बोलाएँ । पहिला सिन्दुर हाल्यो, तेरो प्रेमीलाई देखाउँछु भन्दै लु’गा खो’ले’र रे प गर्यो उनले भनिन् । उनले प्रहरीमा उजुरी दिइन् । तर गाउँका मान्छे र सुनिलको परिवारले दुवै जना कन्य नै हो विवाह गर भनेर सल्लाह गरेपछि सबै मिलेर आफुहरुको विवाह गरिदिएको बताइन् ।
Prevसमिक्षा अधिकारी मिडियामाथि आक्रोश हुदै गरिन् सबैमा यस्तो आग्रह.. …
Nextभुलेर पनि दान नगर्नुहोस यी ४ चिज, नत्र घरका सदस्यमा देखिन्छ यस्तो समस्या
विद्यालय बन्द गर्ने बिषयमा शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो यस्तो निर्णय : अवस्य पढ्नुहोस
के हो पर्सनालिटी ए ? यस्ता ब्यक्तिलाई हुन्छ हृदयघातको खतरा
२४ घण्टामै १२ हजार १३३ जना ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमित भेटीए, जुन अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै